မျက်စိ မှိတ်ပြီး ဇွတ်နှစ် ယုံရမဲ့ အထဲမှာ
ငါ့အတ္တတွေ ငါ့ခြေဖဝါးအောက် အလိုလိုရောက်နှင့်
မင်းကဖြင့် မတော်တဆ ခလုတ်တိုက် သွားခဲ့တဲ့သူပါ
ပြီးပါပြီ... စာတမ်းထိုး... ကန့်လန့်ကာချ နေတာတောင်
ငါလို တုံး အ အ ကောင်က ဆက်ရန်ကျန်သေးသည် လုပ်တုန်း
အဟုတ် မုန်းပါပြီ ဆိုမှ အသဲတွေလည်း​‌​ကွဲ
ဝှက်ဖဲတွေ အပြည့် နဲ့ အလဲမထိုးခဲ့ပေမဲ့
(ရင်နာနာ နဲ့ ပဲ ....)
လူအချင်းချင်း အသဲခွဲခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ.....:P
Image Source : myniceprofile.com
Anonymous Sun Jan 17, 01:03:00 AM GMT+8
အလဲ့.. မိုက်သဗျို့... ကဗျာက။
တခါတလေလည်း အဲ့လို တုံးတိလုပ်ပစ်တာမျိုး ကောင်းလေ၏။ မဟုတ်ရင်မလွယ်။း)))
မောင်မောင် Sun Jan 17, 01:24:00 AM GMT+8
မင်းကဖြင့် မတော်တဆ ခလုတ်တိုက် သွားခဲ့တဲ့သူပါ"
စာသားလေးတွေ ကို အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာ။
တကယ်အသည်းကွဲခဲ့ ဖူးတယ်ဆိုယင်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကိုချစ်ဖေ Sun Jan 17, 02:58:00 AM GMT+8
လူအချင်းချင်း အသဲခွဲချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ.
ချစ်တဲ့သူချင်း အချင်းချင်း ပိုချစ်ကြပါစေ.
Moe Cho Thinn Sun Jan 17, 05:04:00 AM GMT+8
အသည်းကွဲဖို့တောင် အင်အားမရှိတော့လို့ တဖက်သတ် တခန်းရပ်ပစ်လိုက်တာ မဟုတ်လား။ သိနေတယ်လေ..
Anonymous Sun Jan 17, 04:36:00 PM GMT+8
ဂျီးတော်ညွှန့်..အသဲကွဲနေတာလားဟင်! ဒိုင်ပွဲရပ်ဆိုလို့ လက်ဝှေ့ပွဲမှတ်လို့ ပြေးလိုက်လာတာ။ ဒီရောက်မှ ဖဲဝိုင်းမှာ အသဲကွဲနေတာကိုး...။ မောတာ.။
~ဏီလင်းညို~ Sun Jan 17, 06:15:00 PM GMT+8
Nge Naing Mon Jan 18, 07:23:00 AM GMT+8
ကဗျာလေးက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သိပ်ကောင်းတယ်။ လူလူချင်း အသည်းခွဲခြင်းကင်းကြပါစေလို့ ၀ိုင်းပြီးဆန္ဒပြုသွားပါတယ်။
အင်ကြင်းသန့် Mon Jan 18, 09:54:00 PM GMT+8
ငါ့အစ်မက ဒါမျိုးတွေလည်း ရသေးတာပဲ